ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၈-၅-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ မရှိသေးချိန် နိုင်ငံခြားသားများမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မပြုသင့် ECDF ပြော click
- အစိုးရက တနိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ကြောင်း တရားဝင် ကြေညာပေးရန် သျှမ်းခေါင်းဆောင် တောင်းဆို click
- ဆက်ဆံရေးရုံးသည် ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရန် အကောင်းဆုံးနေရာ - RCSS ခေါင်းဆောင် ပြော click
- အစိုးရပိုင် သတင်းစာပါ စွပ်စွဲချက် မဟုတ်မှန်ကြောင်း ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ငြင်း click
- OIC နှင့် ပတ်သက်မှုခြင်းမရှိဟု RCSS ပြော click
- ကယားပြည် ဒုတိယအကြိမ် အပစ်ခတ်ရပ် ဆွေးနွေးပွဲ မေလအတွင်း မသေချာ click
- KIO ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများ စားနပ်ရိက္ခာ လိုအပ် click
- ထိုင်းနိုင်ငံသား လီဆူး ၁၆ ဦးကို UWSA ပြန်လွှတ်ပေး click
- တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိ click
- မြန်မာအနီး ဘင်္ဂလာရေပြင်တွင် လူသေအလောင်း ၇ လောင်း ထပ်မံတွေ့ရှိ click
- အိမ်မပြန်နိုင်သေးသူ ၆၀၀ အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဂရုဏာမြန်မာမှ ဆန်များလှူဒါန်း click
- ပုဒ်မ ၄၀၁ ကို နိုင်/ကျဉ်းဟောင်းများ အလိုမရှိကြ click
- နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၃ ဦး ပြန်လည်လွှတ်ပေး (ရုပ်သံ) click
- လီဆယ်ကာ တိုင်ကြားခံရမှုကြောင့် ထောင်ကျ (ရုပ်သံ) click
- ကြံ့ခိုင်ရေး အမာခံနယ်မြေတွင် ရတပပါတီ ဗဟိုကော်မီတီ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်မည် click
“သတင်းစာ အသစ်တွေ ဝယ်တယ်” (ကာတွန်း တော်တီဆွေ)
- ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှူဒါန်း click
- ကော့မှူးမြို့မှာ ရွေ့လျားစာကြည့်တိုက် ဖွင့်မည် (ရုပ်/သံ) click
- ပုဒ်မ ၃၇၇ ဟာ လိင်တူချစ်သူတွေကို ဥပဒေနဲ့ နှိပ်ကွပ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု (ရုပ်သံ) click
- လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံမှု မပေးနိုင်၍ အမျိုးသမီးအလုပ်သမား စေလွှတ်မှု စောင့်ကြည့် click
- တပတ်အတွင်း သတင်းဓာတ်ပုံ click
- မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဘန်ကောက်-ရန်ကုန် မဟုတ်သော ခရီးစဉ်ဖြင့် Nok Air ဆင်းသက်မည် click
- ဗုဒ္ဓဂယာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ တရားဝင်ဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးတော့မည် click
- မြန်မာနိုင်ငံသို့ တင်ပို့်မည့် Pseudoephedrine အခွံ အမြောက်အမြား မဏီပူရပြည်နယ် မြစ်တခုတွင် တွေ့ရှိ click
- အသက်နဲ့ထပ်တူ မေခလာ သိန်း ၅၀ လှူ click
- ပညာနိုင်ငံတော် (၃) - စာတတ်တဲ့ ရွာကလေး (သူ့အမြင်) click
- တူမကို လိင်ကျွန်လုပ်ခိုင်းရန် အမေရိကန်သို့ ခေါ်လာသည့် အဒေါ်ကို ဖမ်းမိ click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:02 PM
နှစ်စဉ် ဖွင်.နေကြ ဓါတ်ပြားဟောင်းများ
... ကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းအပ်ရင်အပိုငွေကြေး မကောက်ရ ၊ ဘာ ညာ ကြေးတွေမကောက်ရနဲ. ၊
ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူမယ် ပြောတာဘဲ ၊
နောက်ဆုံးတော. ကျောင်းတွေမှာ အနိမ်.ဆုံး (အလီလီကောက်လို.)
ကျောင်းသား တစ်ယောက် (တစ်သောင်း ကျပ်တော.)ထည်. ရတာပါဘဲ ။
.....သင်္ကြန် မတိုင်ခင် သင်္ကြန် တွင်း ဘတ်စ်ကားခတွေ
မတက်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ် ... ပြောပြီးသင်္ကြန်
ကျတော. ကားခ ၂ဆ ၊၃ဆ ပေးရတာပါဘဲ ။
.. အရင်လည်းဒီတိုင်းဘဲ ၊ အခုလည်းဒီတိုင်းဘဲ ၊
.. ဟဲ ဟဲ ဟဲ ။
ဘာမှ ပြင် မရ တဲ့ အတူ တူဘာ မှမ ပြော ဘဲဒီ တိုင်း နေတာ က ကောင်း ပါ တယ်လေး သီခံ ကြပါ ရွေ မြန် မာတို့ ရယ်